Naxariista iyo Fudeydka Islaamka-DHAGAYSO – Radio Muqdisho
Diinteenna Suubban ee Islaamku waa diin naxariiseed, waxayna ka digtay waxa kasta oo macnahaas ka hor jeeda.
Qur’aanka ayaa meelo badan looga sheegay in diintan loo soo dejiyay in ay nolosha u fududeyso dadka. Nabigeenna ayuu eebbe weyne ku yiri: Waxaad naxariis u tahay caalamka.
Laakiin nasiib darro kooxo u nisba sheegta Islaamka, ayaa suurad xumeynaya islaamka iyagoo magaca islaamka ku xasuuqaya dadkii muslimiinta ahaa, kuna kacaya falal ay si cad u reebtay shareecada islaamku.
Barnaamijka Tubta Toosan ee toddobaadkan, waxaan ku gorfeyn doonnaa, sida ay diinta islaamku tahay diin naxariiseed u u turta dadka, waxaana marti noogu ah Sheikh Maxamed Cabdulle Maxamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Qeybta Hoose ka dhageyso barnaamijka oo dhammaystiran
Hey’adaha ammaanka oo saddex Shabakadooda oo argagixiso bur-buriyey (Sawirro)